IINDIDI ZEESHOWER DOORS (UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iindidi zeeShower Doors (Uyilo lwegumbi lokuhlambela)
Iindidi zeeShower Doors (Uyilo lwegumbi lokuhlambela)
Apha uya kufumana iintlobo ezithandwa kakhulu kwiingcango zeshawa kwiprojekthi yakho yokuhlenga kwakhona yangasese. Xa ujonge ukulungiswa kwekhaya lakho, ukutyala imali kwigumbi lokuhlambela sesinye sezona zigqibo zibalaseleyo onokuzenza. Ishawa entsha inokubonakalisa, kwaye ukukhetha iingcango zeshawa ezifanelekileyo ngumsebenzi obalulekileyo. Apha ngezantsi uyakufumana iintlobo ezahlukeneyo zokuvalelwa kweglasi, kwaye ubone izitayile zeminyango edumileyo njengokutyibilika, iihenjisi, ukubamba kabini, umphunga kunye nepivot ukukhetha eyona ikulungeleyo.
Isibonelelo esinye seshawa enomtsalane bubuchule bayo bokuguqula indawo yangasese ibe yindawo emnandi ngakumbi. Inxalenye enkulu yokudala umoya oyifunayo inokufezekiswa kuxhomekeke kuhlobo lomnyango weshawa owukhethayo. Olunye uphawu lomnyango weeshawa ezinje ngeKohler, iBasco, iSterling kunye neFleurco zinoluhlu olubanzi lweentlobo, iimilo kunye nobukhulu ezinokulingana ngokugqibeleleyo kwaye zinokuhombisa indawo yakho. Jonga isikhokelo sethu sokugqibela Iishawari zangasese yoyilo ngakumbi.
Kukho iintlobo ezintathu zoyilo lweeshawari ezikhoyo. Ezi zimi zodwa, ikona yima yodwa kunye neeshawari zebhafu. Umnyango weshawari owufunayo uya kuxhomekeka ikakhulu kwisitayile sokuhlambela onaso okanye osifaka kwigumbi lakho lokuhlambela. Ukukhetha ucango kuya kufuneka uqwalasele ubungakanani beshawa kunye nesixa esifunekayo sokuvula.
Iipivot Shower Doors
Iminyango yokuhlamba enehenjisiweyo
Iingcango zokuhlamba ezijikelezayo
Iingcango zeNeo Angle Shower
Iingcango zokuhlamba iiBi Fold - Bath Screen Doors Shower Doors
Amacango okuhlamba ayilwe
Iingcango zokuhlamba ezingenasiphelo
Iintlobo zeGlasi zeShower Door
Ukusuka kwiindidi ezahlukeneyo zeengcango zeshawa, ezona ntlobo zibalaseleyo nezaziwayo zezi zilandelayo.
izimemo zomtshato ezinamagama abazali
Iingcango zeshawari ezityibilikayo, ezaziwa nangokuthi kukucoca iingcango zeshawa zaziwa kakhulu ngokutya isixa esincinci sendawo, esibonelela nangokuvulwa kweshawa ngokubanzi ebetha ubuncinci ii-intshi ezingama-60. Le minyango ineepaneli ezimbini okanye nangaphezulu, ezishenxayo ngokuchaseneyo eziqhotyoshelwe kumzila wokutyibilika ukusuka kumgaqo kaloliwe ongaphezulu kunye nomgaqo ongaphantsi. Ezi zinokusetyenziselwa iishawa ezizimeleyo okanye zilungiselelwe ngokufanelekileyo kwiibhafu. Iingcango ezityibilikayo zihlala zisetyenziselwa iishawa zebhafu, i-alcove kunye neekona ezimile zodwa iiyunithi.
Iingcango zeshawari zepivot ziqhutywa ngehenjisi yeepivot encanyathiselwe kwelinye icala lomnyango ivumela iqondo le-180 kwaye inokujika iye kwicala elinye. Ukongeza, ucango lunokujikeleza macala onke embindini ukuba ihenjisi incanyathiselwe embindini endaweni yamacala omnyango. Amanye amagama omnyango wepivot yiphaneli enye ejinga okanye uvula iingcango ezivulekileyo.
Iingcango zeshawari zePivot zihlala zifakwa kwiindawo zokuhlambela ezizimeleyo okanye kwiishawari zetywala. Iingcango zepivot zihlala zisetyenziswa kwiishawa ezinezivulo ezincinci, ngesiqhelo i-36 ″, nangona kunjalo zinokufikelela kububanzi njenge-48 ″
Le ndawo yokuhlambela iyimpawu ishawari yetravertine ngomnyango wehenjisi yehenjisi kunye nebhafu ezimeleyo.
Umnyango oxhonyiweyo ufana nocango olujingayo olunokusetyenziswa njengomnyango weshawari ukuvula kwicala elinye. Iihenjisi zinokujijwa kwiipaneli zeshawari okanye kwiindonga ezidibeneyo. Iingcango zeshawa ezixhonyiweyo zezona zidume kakhulu kwiindawo zokuhlamba ezizimeleyo okanye kwindawo yokuhlamba.
Iingcango zeshawari ezixhonyiweyo zihlala zibhekiswa kwiminyango yehenjisi esecaleni ngenxa yokubekwa kweehenjisi ngaphezulu nasezantsi. Isibonelelo esinye solu hlobo lubonelela ngenkxaso engaphezulu emnyango othintela imfuno yesihloko ecaleni komnyango. Oku kuseta kufanelekile kwisitayile sokuhlamba iglasi.
Iingcango zeshawari ezijikelezayo zihlala zivulwa ngaphakathi kwaye zinendawo eyongezelelweyo ngenxa yemiphetho egoso yomnyango. Iingcango zeshawari ezijikelezayo zihlala zifakwa njengekona iingcango zeshawari ezimeleyo ezinika lula ekugcineni iinjongo ngenxa yobume begophe lomnyango.
Umnyango ngokwawo uqhagamshelwe phezulu nasezantsi kwesakhelo esibonelela ngamandla ngakumbi ekusebenzeni kakuhle. Olu hlobo lomnyango luhlala lubuyiselwa umva ukusebenzisa ukungena kungena ngasekhohlo nangasekunene.
Iingcango zeshawa ye-engile ye-Neo ineepaneli ezintathu, enye ingumnyango kunye nezinye ezimbini njengeepaneli zeshawari ezifakwe ngokungqinelana neendonga. Iingcango zeshawa ze-Neo zifanelekile njengendawo yokuhlamba yangasese yekona.
Olu hlobo loyilo lunokuthatha indawo encinci, okanye kumagumbi okuhlambela amakhulu uyilo lungahamba lube lukhulu kwaye lube yindawo entle ekugxilwe kuyo. Iingcango ngokubanzi zingafakelwa kujingi evulekileyo ukusuka ekunene okanye ekhohlo. Ndwendwela igalari yethu Iishawa zodidi ukubona igalari yezinye izimvo kunye nenkuthazo.
Iingcango zeshawari zeschool shower zezona zilungileyo kuzo zombini ezi hlabathi zisebenzisa indlela yokuhambisa umkhondo womnyango odlulayo kunye nendlela yokusonga yomnyango weepivot. Iipaneli ezimbini zeengcango zescreen sokuhlambela ziqhotyoshelwe ngehenjisi ephindwe kabini kwaye isongwe ngokuqinileyo ngaphakathi ngaphakathi komnye yenze indlela yokuhamba. Kukho iingcango zeshawari eziphindwe kathathu ezikhoyo, nangona kunjalo zixhaphake kakhulu kunesango eliqhelekileyo lokuhlambela.
Umnyango ojikelezwe kabini sisigcini sokwenene sokugcina i uyilo oluncinci lokuhlambela ukulungiswa. Iingcango ezisongekileyo zilungele iimeko eziphantsi zovalo oluncinci lokuhamba. Iingcango ezisongekileyo zonyusa indawo kwishawari emileyo ngaphandle kokuphazamisa ukugcwala kwabantu ngokujikela ngaphandle okanye ngaphakathi.
Ngaba ufuna ukuziva ukonwabela i-spa yezempilo kwinduduzo yekhaya lakho? Iishawa ezixhotyiswe ngolawulo lwedijithali kunye nejenereyitha encinci yomphunga inokuvelisa i-sauna entle njengamava anokukushiya uziva ukhululekile kwaye uhlaziyiwe.
Uyilo lomhlaba wentlango
Ukuba ufaka ishawa yomphunga, unokufuna ukuqwalasela izinto onokuzenza xa ufaka umnyango womphunga kwigumbi lokuhlambela. Ukufumana iinyani ngokuthe ngqo, umnyango womphunga bubungqina bomphunga kuzo zonke iziphelo zomnyango ukusuka emgangathweni ukuya eluphahleni ukuze kubambe umphunga ngaphakathi kwigunjana lokuhlambela. Ngokwesiqhelo, ucango lomphunga lunokuza kwiindlela ezininzi zoyilo ukusuka kwiglasi yokugqitha (ukutyibilika) iingcango zomoya oqinileyo kwiingcango zepivot.
Lo mnyango womphunga wokuhlamba umphunga uneglasi egosogoso phezulu evula ubeko lwendlu yokuhlambela ebanzi kunye nebhafu yokuma yasimahla kunye nombala wekhrimu omnyama ngesipili esigobile.
Ezi ndidi zikhankanyiweyo ngasentla zeengcango zeshawa zingahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwa ngokuxhomekeka kwinkcazo enazo iingcango zeshawari. Ezi ntlobo zeminyango yeshawari zinokuhlelwa ngokwamaqela
1. Amacango okuhlamba ahlonyelweyo
2. Iingcango zokuhlamba ezingenasiphelo
Iingcango zeshawari ezenziwe ngamacala ngokubanzi zenziwe ngealuminiyam okanye ezinye izinto ezidityanisiweyo ezineefreyimu ezihamba ngokuthe tye kwaye ngokuthe nkqo emnyango. Iingcango zeshawari ezinamagama zinokuba yingxaki xa kufikwa kwinkqubo yokucoca njengoko izakhelo zomnyango weshawari zihlala ziqokelela amanzi.
Iglasi kunye nendibaniselwano yealuminiyam inokugxininisa umnyango weshawa kwaye iwunike umtsalane owahlukileyo wendabuko kodwa okwangoku igumbi lokuhlamba. Ukugqitywa kwe-chrome gloss gloss kunokusebenza kakuhle kakhulu, kumnyango weshawari owenziweyo ngokudibanisa nohlobo lwesinyithi.
Iingcango zeshawari ezingenazingcingo zihlala zifakwa kumakhaya onke anamhlanje ngenxa yesibheno sanamhlanje. ezi ntlobo zeengcango zeshawari zifunwa kakhulu ngenxa yoyilo kunye nobuhle bazo. Yongezwe kubuhle, ukugcinwa ngokulula kunye nokulula ekuthwaleni yiyo loo nto iingcango zeshawari ezingenasiphambili ziphambili. Iingcango zeshawari ezingenazingubo zinokuguquguquka kakhulu kwaye ngokubonakalayo zidala imo yokuphangalala ngoncedo lweglasi. Bona Okuninzi Uyilo lokuhlamba ngaphakathi Apha.
Kwili hlabathi langoku abayili beze nezinto ezithandekayo, iipateni, imibala kunye nokwahluka kweentlobo zezinto kwiminyango yeshawari. Zihambile iintsuku, iingcango zeshawari zafakwa ngeglasi ecacileyo kuphela.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lokwahluka kweentlobo zeglasi.
Iglasi ecacileyo lolona hlobo lusetyenziswa kakhulu lweglasi yeshawari evumela ukukhanya okuphezulu kungene kwaye kudibanise ukukhanya kunye nobubanzi bayo yonke indawo yokuhlamba.
Iglasi ye-HD yenziwe ngombala oluhlaza ocacileyo yiyo loo nto ufumana umbono ocacileyo wekristale ngaphakathi kwigumbi lokuhlamba. Iglasi ye-HD iyakwazi ukuhambisa ukukhanya okuphezulu kwenkcazo engcono.
Iglasi enqabileyo inembonakalo eyahlukileyo kunye nokuthungwa okubonelela ngombono ongacacanga ukusuka kwelinye icala ukubonelela ngolawulo olubonakalayo. Elinye icala leglasi linembonakalo yeqabaka ngelixa elinye icala licacile kwaye ligudile.
Iglasi yemvula eshiya umnyango weshawa- Jonga eWayfair
Yintoni enomdla ngakumbi ngeglasi yemvula kukukwazi ukufihla amanqaku okanye amabala kwiglasi. Iglasi yemvula ibonelela ngemfihlo yabucala ngenxa yemvula eyilelwe ngokukodwa njengokuthambeka kwelinye icala leglasi.
Iglasi yebronze ineempawu zokungalingani kweengcango zeshawa yeglasi ene-tint emnyama enikezela ubumfihlo ngokupheleleyo kubasebenzisi. Iingcango zebhate zeglasi zobhedu ziyaziwa kwimarike yendlela yazo ethandekayo, emnandi.
Iglasi engwevu sisiseko esimnyama esisekwe kwisilivere esivumela ukukhanya okuncinci kakhulu ukuba kungene. Oku kukuphumelela okukhulu kwimarike efanayo necango lobhedu lokuhlambela iglasi yesibheno sabo esihamba phambili esenza ukuba beme ngaphandle kweglasi yemveli ecacileyo.
Ngoncedo olongezelelekileyo ekwenzeni uyilo lwakho lokuhlamba kunye noyilo jonga eli phepha malunga Isoftware yokulungisa indawo yangasese . Sebenzisa enye yezi nkqubo kunokwenzeka ukuba uzame ngokukhawuleza izinto ezahlukeneyo zeshawari ukukunceda ufumane efanelekileyo.
Iindwendwe zomtshato womtshato kaDavid
Ukuma kwekhekhe lomtshato eli-3
yintoni oza kuyinxiba kumtshato wehlobo wamadoda undwendwe
ixabisa malini umntu ophethe umtshato